2019-07-06 | Job Vacancy in Myanmar
2019-07-06 22:24:34 ,Global Queen PreShcool နဲ့ အတူ…
Global Queen PreShcool နဲ့ အတူလက်တွဲ လုပ်ကိုင်ရန် ECCD လက်​မှတ်​ရ မူကြို ဆရာမ နှစ်ဦး အမြန် အလို ရှိပါတယ်။
– က​လေးများအား​စေတနာထားပြီး စိတ်​ရှည်​သူ ၊​ရေရှည်​လက်​တွဲလုပ်​ကိုင်​ရပါမည်။
– Creative ဖြစ်ပြီး ကလေးများနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့Lesson Planများ ရေးဆွဲ နိုင်ရပါတယ်။
– ဖျတ်​လက်​တတ်​ကြွ၍ သင်​ယူ​လေ့လာချင်​စိတ်​ရှိသူဖြစ်​ရမည်​။
-working hours -8:30—5:00
-saturday /sunday are off.
-allownace /refreshment /annual bonus ခံစားခွင့်များ
လျှောက်ထားလိုပါက CV Formအပြည့်ါအစုံ ကို Viber Phone No 09799651063သို့ expected salary ကိုဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
လိပ်စာ – ရန်​​​ပြေ ၂၂လမ်းထိပ်
​ရွှေမြန်​မာ မင်္ဂလာခန်းမဝင်း၊ သာ​ကေတမြို့နယ်​၊ ရန်​ကုန်​။
☎ – 09 799 651063
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-07-06 by admin.
2019-07-06 21:28:51 ,အလုပ်​အကိုင်​အခွင့်​အလမ်း​ကော…
1) Chinese Translator – M/ F (400,000 – 700,000)
• • Any Bachelor Degree
• • At least 2-year or 3-year experience in related field
• • Fluent in Chinese language skill for translation & Interpterion
• • Basic English knowledge and computer literate and Computer literate, Internet & Email
• • Motivate & able to communicate with all levels of employees
Net Salary Range: 400,000 – 700,000 MMK
1. Attend conferences and meetings and interpret
2. Translateavariety of documents form source language to Myanmar Language
3. Accompany with foreign visitor and facilitate communication between receiving parties and visitors.
4. Any other duties/tasks and occasional responsibility have to be done
Ferry: Yes (No-3 Highway Junction, Htouk kyant Junction and Chouk Kwake Junction for Night Shift)
Allowance: Yes (According to Company Policy)
Opportunities: Inter Promotion and Management Potential
Training: Yes (relative with Job requirement)
2) Japanese Translator (N2/N3) – M/F
( 400,000 ~ Above)
1. Bachelor Degree or equivalent, optional certification.
2. Related experience in teaching environment.
3. Japanese4skills required, equivalent N2/N3.
4. Computer literate, Email & Internet.
5. Flexibility to work.
Location : Mingalardon Tsp
3) QC Supervisor – M/F (500,000 ~8000,000)
• Basic English knowledge and computer literate in MS Word & Excel and Outlook
• Have strong interpersonal and communication skill
• Motivate & able to communicate with all levels of employees
• Accessible to work in Mingalardon Township
Net Salary Range: 500,000 – 800,000 MMK
4) Agriculturalist (စိုက်​ပျိုး​ရေး ပညာရှင်​) – M/F (800,000+ Other Allowance)
– Any graduate (or) More prefer
graduate from Yaezin University
– Must have NGO experiences(either at local or international NGOs).
– Able to speak and write English and Burmese. (Mastering Shan Language will beaplus).
– Able to communicate with Gov’t bodies like Agriculture ​anf FDA departments.
– Fit to travel anytime.
– Able to work at tea plantation at Northern Shan State
– Cooperate with NGOs like Helvetas and GIZ, etc., for training needed and other supports
– Haveastrong enthusiasm at social development.
– Able to work at Mountain area with tea farmers .
Head Office Location -Mayangone Tsp
Industry – Distribution Company
ရှမ်းပြည်​နယ်​ ​မြောက်​ပိုင်း တန့်​ယမ်းမြို့တွင်​​သွား​ရောက်​​နေထိုင်​နိုင်​သူဖြစ်​ရမည်​။
5) Marketing Assistant – M/F
– ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည် ။
– သက်​ဆိုင်​ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁~၂ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသူ ဖြစ်ရမည် ။
– English4Skills ကျွမ်းကျင်​သူ ဖြစ်​ရမည်​ ။
– အသက် ၂၀ ~ ၃၀ နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည် ။
– ကား​မောင်းနိုင်​၍ Driving License ရှိသူ ဖြစ်​ရမည်​။
– သွတ်လတ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင် ရမည် ။
Industrial – Interior & Decoration Company(Foreign)
Location – Insein Tsp
Working Hour & Day: 9:00 am ~ 6:00 pm (Mon~Fri),Sat-Alternate,Sun &
6) Graphic Designer – M (Nego)
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ3နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
Photoshop, illustrator ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
သာကေတ၊ သုဝဏ၊ တောင်ဒဂုံ၊ ရွာသာကြီး၊ မြောက်ဒဂုံ။ဒေါပုံ ယုဇန၊ သင်္ဃကျွန်း တွင် နေထိုင်သူများကို ဦးစားပေးမည်။
သာကေတ၊ သုဝဏ္တ္ထ ၊ တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ဒေါပံ၊ု ယုဇန၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ တောင်ဥက္ကလာ၊မြောက်ဥက္ကလာ၊ ရွာသာကြီး တွင် နေထိုင်သူများကို ဦးစားပေးမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ မျှော်မှန်းလစာအား ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။
Office hour- Mon to Fri ( 9am to 5:30pm)/ Sat (9am to 5pm)
Industry- Media & Advertising
Location – Thaketa Tsp
7) Admin Executive – Male (Neg0)
1. Computer ( MS excel,word, power point), internet , email ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးစွဲတတ်ရမည်။
2. Photoshop အခြေခံ တတ်သူဖြစ်ရမည်။
3. Any graduate
4. အသက် 25– 30 အတွင်း ရှိသူဖြစ်ရမည်။
5. လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ3နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
6. ဖိအားဒဏ် ခံနိုင်ရမည်။
7. မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
9. လူအများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။
10. တောင်ဒဂုံ၊ ရွာသာကြီး၊ မြောက်ဒဂုံ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ စံပြဈေးတွင် နေထိုင်သူများကို ဦးစားပေးမည်။
11. လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ မျှော်မှန်းလစာအား ညှိနှိုင်းပေးပါမည်။
8) ဒဂုံ မြို့နယ်​ရှိ နိုင်​ငံခြားသင်​တန်း​ကျောင်းတွင်​ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရန်​
သန့်​ရှင်း​ရေး – မ (120,000 ~ 150,000)​
– အ​တွေ့အကြုံမရှိသူများလဲ ​လျှောက်​ထားနိုင်​ပါသည်​။
– အသက်​ ၁၈~ ၂၈ အတွင်းရှိသူ
– ပညာအရည်​အချင်း မကန့်​သတ်​ထားပါ
👉Job Trust Facebook Page ကို like & follow လုပ်​ထားခြင်းဖြင့်​ အလုပ်​အကိုင်​ အခွင့်​အလမ်းသစ်​များအား ​နေ့စဉ်​ ရှာ​ဖွေနိုင်​ပါတယ်​​နော်​ 👈
👍အလုပ်အကိုင်များအား 'အခမဲ့' လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်နော် ။👍
📧 Email : jobtrust.recruitment@gmail.com, jobtrust.cv@gmail.com
📱Viber : ‎09-443427711
📞Phone : ‎09-443427711 ~2~3
2019-07-06 21:28:45 ,Job Vacancy for Mandalayမန္တ​လေ…
Job Vacancy for Mandalay👨‍🔧❇️မန္တ​လေးမြို့၊ လမ်း80/17×18 ကြားရှိ တရုတ်​စား​သောက်​ဆိုင်​တွင်​အချိန်​ပိုင်းတာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရန်​ Chinese Translator – ကျား/မ (2)ဦး လစာ – (200000)ကျပ်​ အလုပ်​ချိန်​ – (5 PM to9PM) ပိတ်​ရက်​ – တစ်​လ(2)ရက်​ *​ရေရှည်​လုပ်​ကိုင်​နိုင်​သူဦးစား​ပေးမည်​* ​​လျှောက်​ထားလိုပါကViberမှတစ်​ဆင့်​Cv Form​ပေးပို့နိုင်​ပါသည်​။ ဆက်​သွယ်​ရန်​ ☎ 09-898999112 Viber No – 09 – 256130565
2019-07-06 21:28:27 ,မှန်ချို တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လ…
မှန်ချို တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ တွင်
❀﻿ Quality Control Department မ (၁)ဦး
> B.Pharm ဘွဲ့ ရရှိထားသူ။
> ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများကို စိတ်ပါဝင်စား စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သူ။
> အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်နိုင်သူ။
> GMP,ISO inspection များကိုစိတ်ဝင်စားသူ။
> လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူ။
❀﻿ Research & Development Department မ (၁)ဦး
> သုတေသနနှင့် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ၊တီထွင်စမ်းသစ်မှုများကို အထူးစိတ်ဝင်စားသူ။
❀﻿ Laboratory Assistant မ (၃)ဦး
> B.Sc or M.Sc (IC) ဘွဲ့ ရရှိသူ
> B.Sc or M.Sc(Chem:) ဘွဲ့ ရရှိသူ
> B.Sc or M.Sc(Bot) ဘွဲ့ ရရှိသူ
> ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းများ၊ ဆေးဝါးများကိုသတ်မှတ်ထားသောစံချိန်၊စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီရန်စစ်ဆေးခြင်း။
> ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသတ်မှတ်သော စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကျွမ်းကျင်​စွာ အသုံးပြုနိုင်​ခြင်း။
> Microscope ဖြင့်​ plant cell character ကိုကျွမ်းကျင်စွာ လေ့လာနိုင်သူ​ဦးစားပေးမည်။
❀﻿Planning Manager မ (၁) ဦး
>Diploma in Business Management ရရှိထားသူ။
>Planning လုပ်​ငန်းပိုင်း​တွေ အ​တွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃)နှစ်​ရှိသူ။
>Medicinal manufacturing လုပ်​ငန်းတွင်​ planning အားကျွမ်းကျင်​စွာ​ဆောင်​ရွက်​နိုင်သူ။
>ISO Standards,Local government policies &proceduresအားနားလည်​ပြီး ​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​သူ။
>လုပ်​ငန်း၏ အခြားဌာနများနှင့်​ ပူးတွဲ​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​ပြီး communication skill​ကောင်းမွန်​သူ။
❀﻿ HR Manager မ (၁) ဦး
>Diploma in Human Resources Management ရရှိထားသူ။
>HR Manager positionဖြင့်​ လုပ်​ငန်းအ​တွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၃)နှစ်​ရှိသူ။
>HR policy& disciplinary procedure များချမှတ်လုပ်ဆောင်​နိုင်​သူ။
>လုပ်​ငန်း၏ အခြားဌာနများနှင့်​ ပူးတွဲ​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​ပြီး communication skill​ကောင်းမွန်​သူ။
✉ ✉ ​လျှောက်​ထားလိုသူသည်​ ဓါတ်ပုံ ၂ပုံ၊ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ဘွဲ့ လက်မှတ်၊ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတန်း အထောက်အထား များနှင့် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ (သို့ ) email သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
✉ ✉ ဆက်​သွယ်​ရန်​လိပ်​စာ
E-mail : ceo@hmanchopharmaceutical.com
2019-07-06 17:56:36 ,အဝတ်လျှော်မီးပူတိုက်ရန် Compa…
Company name : Mr.Cleaning
အလုပ်နေရာ – တာမွေကျောက်မြောင်းဈေး
Viber No. – 09772771343
သို့ CV ပို့ပေးပါရှင့်
လစာ – 120000 ++++
အလုပ်ပိတ်ရက် – တစ်လနှစ်ရက်
အလုပ်ချိန် – မနက် 8:00 – ညနေ 6:00
2019-07-06 17:56:20 ,#999Job #urgent #မင်္ဂလာတောင်ညွှ…
#မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်ရှိ Real Estate Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်-
#Digital Marketing (M/F – 2P)
– Digital Marketing နှင့်သက်ဆိုင်သော Diploma (or) Certificate ရှိသူဖြစ်ရမည်။
– English4skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ (at least conversation level)
– Digital Marketing နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိရမည်။
– အိမ်၊ခြံမြေလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော Social Media and Website များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
– Social Media Tools ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
– လစာ (ညှိနှိုင်း)။
– အလုပ်ချိန် (9am~5pm)
– တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
– အလုပ်ရလျှင် ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
* CV Form တွင် Digital Marketing နှင့်သက်ဆိုင်သော Website, Social Media များကို ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်*
☎️ 0930449999(viber), 09797423192
2019-07-06 15:43:02 ,Vivo Group Company မှ အောက်ပါ …
Vivo Group Company မှ အောက်ပါ ဝန်ထမ်းများအမြန်​ လိုအပ်လျှက်​ရှိသည်​။ 🏫 တာမွေရုံးခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် (၁) Sales Man 👉 ကျား(၅)ဦး 👍 တက္ကသိုလ်တခုခု မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့) အထက်​တန်း​အောင်​ပြီးသူ ဖြစ်​ရမည်​။ 👍 FMCG Field တွင် လုပ်​သက်​အ​တွေ့ကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ်​ ရှိရမည်​။👍 အရောင်းပိုင်းတွင်​ ကျွမ်းကျင်စွာ ရောင်းနိင်သူဖြစ်ရမည်​။👍 ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး Personality ကောင်းမွန်ရမည်။ 👍 စကားအပြောအဆိုပြေပြစ်ချိုသာရမည်။
2019-07-06 15:42:50 ,Job Vacancy Announcement
📣Job Vacancy Announcement 📣
2019-07-06 15:42:37 ,မင်္ဂလာပါ Vacancy Myanmar နှင်…
Vacancy Myanmar နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော #International Schools များမှ ဝန်ထမ်းများထပ်မံခေါ်ယူနေပါသည်
လျှောက်ထားလိုသူများသည်မိမိတို့၏ CV Form ကို 📩vacancymyanmar@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်
အထက်ပါရာထူးများနှင့်ပက်သက်ပီးအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက သို့☎️ Office Phone : 09-441856146 (ရုံးချိန်အတွင်း) ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်
2019-07-06 13:07:39 ,­(6.7.2019) ကျွန်မတို့ #Countr…
­(6.7.2019) ကျွန်မတို့ #Country_Job_Agency တွင် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ လက်ရှိလို အပ်သော Position များကို
1. အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Japan_Translator F(5)posts
– Salary 400000~500000Ks
– ဘွဲ့ရ/ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း
– Japan N2/N3 အောင်မြင်ပြီးသူ
– Exp (2)yrs (Japan Translator Field)
– Age (28)yrs Under
– အလုပ်ချိန် (73း0~4း15)
– စနေနေ့ဝက်/ တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Su Hnin Ph; 09-897668880)
2. လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Chinese_Translator M/F(5)posts
– Salary 500000~550000Ks
– Chinese (4)Skills ကျွမ်းကျင်
– Exp (3)yrs
– Age (35)yrs Under
– အလုပ်ချိန် (8း00~5း00)
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw May Zin Myint Aung Ph; 09-899909969)
3. မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sr.Account F(3)posts
– Salary 500000~600000Ks
– Age (40)yrs Under
– အလုပ်ချိန် (9း00~5း00)
– တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Win Thuzar Ph; 09-404777933)
4. တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Site_Engineer M/F(5)posts
– Salary 400000~600000Ks
– Estimate/ BQ /Auto CAD(3D)/ Drawing ပိုင်းရရမည်။
– Age (25~40)yrs Under
– Sunday/ Public Holiday Off
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် U Kyaw Lin Oo Ph; 09-264692405)
5. တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Accountant F(3)posts
– Salary 350000~400000Ks
– ဘွဲ့ရ/ LCCI Level (II)UK
– English (4)skills
– Exp (2)yrs
6. မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Phone Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_and_Marketing Supervisor F(3)posts
– Exp (3)yrs (Phone Sale Field)
(2) #Accountant F(3)posts
– Salary 200000~250000Ks
– I stock Software ကျွမ်းကျင်ရမည်။
7. ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဂျပန်စာသင်ကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Japan_Assistant_Teacher F(5)posts
– Salary 220000~250000Ks
– Japan N4 အောင်မြင်ပြီးသူ
– Age (30)yrs Under
– ဗုဒ္ဓဟူးနေ့/ တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည်။
8. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Manufacturing Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Senior_Accountant F/M(10) Posts
– Salary 400,000~450,000 Ks
– LCCI III, လချုပ် နှစ်ချုပ်ဆွဲနိုင်ရမည်။
– Exp (2)yrs Above
– စနေနေ့ဝက်/ တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Thae Thae Ph;09-897668883)
9. ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ Travel and Tour Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Air_Ticketing Staff M/F(5)posts
– Salary 300000~500000Ks
– 10တန်းအောင်/ ဘွဲ့ရ
– International System အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
– Age (20~35)yrs
– အလုပ်ချိန် (9း00~6း00)
– တစ်လ 2ရက်ပိတ်သည်။
10. မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Travel & Tour Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Senior_Ticketing Executive M/F(5)posts
– Salary 300000~400000Ks
– Computer Basic, Advanced Excel, English4Skills
– Age (23~30)yrs
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Aye Aye San Ph; 09-451811412)
11. မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Marketing_Supervisor M(5)posts
– ဘွဲ့ရ/ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း
– Wayplan ဆွဲနိုင်ရမည်။
– Age (25~35)yrs
– အလုပ်ချိန် (8း00~7း00)
– စနေ/ တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
12. မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Travel and Tour Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Marketing_Manager M/F(3)posts
– Salary 300000~350000Ks
– Exp (3)yrs (Marketing Field)
– တစ်ပတ်တစ်ရက်/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။
13. ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ အိမ်သုံးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Supervisor F(3)posts
– ဘွဲ့ရ/ Computer MS Excel ကျွမ်းကျင်
– Exp (2)yrs (အိမ်သုံးပစ္စည်းအရောင်းပိုင်း)
– အလုပ်ချိန် (9း00~53း0)
– တစ်ပတ်တစ်ရက်/ စနေ (3း00) /အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။
14. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Accountant F(5)posts
– LCCI Level (I,II,III)UK
– Age (30)yrs above
– အလုပ်ချိန် (83း0~53း0)
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)
15. မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ် Mobile Accessories Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Marketing_Supervisor F(2)Posts
– Salary 250,000~300,000 Ks
– Computer MS Word/ Excel
– Exp (1)yr (Phone Accessories Field)
(2) #Accountant F(3) Posts
– Computer ကျွမ်းကျင်/ LCCI II/ i-Stock Software သုံးနိုင်ရမည်။
– Exp (1) yrs Above
– Age (20~30)yrs
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw May Zin Myint Aung Ph;09-899909969)
16. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဓါတ်မြေသြဇာကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– Salary 250000~300000Ks
– LCCI Level (III), I Stock Software သုံးနိုင်ရမည်။
– Exp (1)yrs above
– တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။
17. ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– Exp (2)yrs above (Cash Book သွင်းနိုင်ရမည်။)
– Age (25)yrs above
– စိတ်ဝင်စားပါက (17.7.19)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် (10)နာရီတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)
18. မြို့ထဲဒဂုံရှိ Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Driver M(5)posts
– Exp (2)yrs above (Driver Field)
– Age မကန့်သတ်
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Myo Myo Ph; 09-264692102)
19. ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ Fitness Centerကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Customer_Service Female (30) Posts
– Salary 200,000 ~ 250000Ks
– ဘွဲ့ရ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ
– Computer Basic
– အရပ်အမြင့် 5’6’’ / ရုပ်ရည်ချောမောသူ/ စကားပြောပြေပြစ်သူ
– Age (25~30)yrs
20. ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ ဆေးကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_and_Marketing F(5)Posts
– Salary 200,000~230,000 Ks
– ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း/ ဘွဲ့ရ
– Exp (1)yr
– Age (20~25)yrs
– ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်/ စကားပြောပြေပြစ်
21. ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ Business Management Companyကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Office_Staff M/F(5)Posts
– Salary 150,000~180,000 Ks
– Computer ကျွမ်းကျင်
– Age (30) yrs Under
– စနေ/တနင်္ဂနွေပိတ်/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw May Phoo Ph;09-440544936)
22. သာကေတမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Site_Engineer M/F(7)posts
– BE (Civil)
– Auto CAD (2D)
– Exp (1)yr above
– နယ်တွင် (2)လနေနိုင်ရမည်။
23. မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Mechinery Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Engineer M(5)posts
– Salary 200000~300000Ks
– Exp (1)yr (Sale Engineer Field)
– စနေနေ့ဝက်/ တနင်္ဂနွေ/ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)
24. လသာမြို့နယ်ရှိ FMCG Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Drive M(5)posts
– 9တန်း/ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း
– Age (22~30)yrs
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Zin Mar Ph; 09-424323584)
25. ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Consulting Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Office/ Admin Staff F(3)posts
– Salary 200000~250000Ks++
– LCCI Level (II)UK, Computer Basic (Myanmar / English Font ကျွမ်းကျင်)
– Exp (1)yr (Medical Field)
– Sat/ Sunday/ Public Holiday Off
26. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Export Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Assistant_Accountant F(5)posts
– LCCI Level (I,II)
– Exp (2)yrs (Assistant Accountant Field)
– Ferry ရှိသည်။
(2) #Accountant F(5)posts
– Salary 250000~350000Ks
– LCCI Level (II,III)
– Exp (3)yrs (Accountant Field)
– Sunday Off / Ferry ရှိသည်။
27. လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Engine Oil Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Marketing_Staff F(5)posts
– Salary 180000~200000Ks
– Age (27)yrs Under
– စိတ်ဝင်စားပါက (9.7.19)ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် (10)နာရီတွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Thida Ph; 09-443207160)
28. တာမွေမြို့နယ်ရှိ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #အရောင်းစာရေးမ F(10)posts
– Salary 130000~150000Ks
– 10တန်းအောင်/ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း
– အလုပ်ချိန် (83း0~5း00)
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Thin Lai Ph; 09-897668884)
29. မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ Electronic Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #လက်ရေးစာရင်းကိုင် F(5)posts
– Salary 120000~150000Ks
– 10တန်း/ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း
– Exp (6)months
– Age (38)yrs Under
– Uniform ရှိ/ နေစားငြိမ်းနေနိုင်သူဦးစားပေးမည်။
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw May Phoo Ngone Ph; 09-440544936)
30. ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ Café တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #အဖျော်ဆရာ ကျား (5)ဦး
– လစာ 140000 (ညှိနှိုင်း)
– အသက် မကန့်သတ်
– အတွေ့အကြုံ (1)နှစ်
– အလုပ်ချိန် (အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။)
31. ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ရှိ ကျွဲကောခြံကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #အထွေထွေလုပ်သား ကျား(3)ဦး
– လစာ ညှိနှိုင်း
– မိသားစုရှိပါက အတူနေထိုင်နိုင်ပါသည်။
– စိတ်ဝင်စားပါက (8.7.19)ရက် တနလာင်္နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် 09-458315642)
#Country_Job_Company_Limited ပန်းခြံတာဝါ ၊(၆)လွှာ၊ အခန်း(၆၀၄)ဗားဂရာလမ်း၊ မြေနီကုန်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်
မှာ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။ (မြေနီကုန်း မှတ်တိုင်မှာဆင်းရမှာပါ) #အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရုံးဖုန်းနံပါတ် 01 2306361, 01 2306362 , 01 516639, 09-443207160 , 09-458315642, 09-404777933 များသို့လဲ တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့အထိ(စနေနေ့တစ်ဝက်)ရုံးဖွင့်ချိန် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်းစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
— at Country Job Company – Sanchaung.
2019-08-22 10:06:19 ,#Urgent HR & Admin Supervisor…
2019-08-22 10:06:16 ,Urgent Position မင်္ဂလာဒုံမြို့…
2019-08-22 10:06:12 , မန်းလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ…
2019-08-22 10:05:59 ,Chinese translator ကျား / မ ( …
2019-08-22 10:05:44 ,###### URGENT REQUIREMENT ####…